Umshini wokushisa we-HLQ wokukhipha, ukukhiqizwa kwemishini yokufakelwa
I-HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO., LTD (Igama langaphambili: DaWei Induction Ukushisa Machine Co., Ltd) isebenza ngokukhethekile kwimishini ye-Induction Heating kanye nemishini ye-ultrasonic welding yokukhiqiza nokumaketha iminyaka engaphezu kwengu-15. Imishini imboza i-Automatic Surface Hardening & Tempering Machines, i-ultrasonic plastic welding machine, i-ultrasonic metal welder, i-Air Cooled Induction Heating Machines, i-Flexible Brazing Systems, i-Auto Induction Forging Furnace, uhlelo lokuqinisa lukhuni oluphelele, i-Aluminium ne-Copper Melting Furnaces, Compact Adhesive Curing Systems Efficient Ama-Tube Welders nezinhlelo zokuQinisa iThermal. Zisetshenziswa ngokuqinile ekwelapheni ukushisa, ukubopha, ukubopha, ukuwelda, ukwakha, ukuncibilikisa, ukushisa nokushisa izixazululo ezifanelekayo.AmaTransistor converters asuka ku-500Hz kuya ku-2.0MKHz imvamisa kanye nosayizi wamandla we-IGBT kusuka ku-5 kuye ku-2000 KW.
I-HLQ Induction Heating Equipment Co
Ukushisa imishini yokushisa sebenzisa izingxenye zikagesi ezithuthukisiwe kakhulu namasu ayingqayizivele aphezulu.Bangakwazi ukushisa imishini ngokushesha futhi kancane. Bangakwazi futhi ukungenela okungezansi ukushisa izinsimbi kuze kube yilapho izinsimbi zisebenza ngaphandle kokuxhumana nezinsimbi ngokuqondile. Qhathanisa nezinye izindlela zokushisa, umshini wethu wokushisa wokufakelwa unamathuba amaningi: isimo esiphelele esiqinile, ukuzithiba nomsebenzi wokuzivikela. Iqala ngokucindezela okudingekayo namanzi, kuthatha isikhala esingaphansi futhi sidinga isikhathi esincane sokuqala nokuvala isikhathi, ukushisa ngokuphepha, ngaphandle kokungcola.
Ngokuthuthuka kwenkampani, inkampani yethu inaka kakhulu ucwaningo nentuthuko kanye nensizakalo ngemuva kokuthengisa. Sithobela i-ISO9000-2000 ngokuqinile ekusebenzeni kwethu. Inkampani yethu iwina udumo oluhle ngomshini wethu osezingeni eliphakeme futhi omuhle.
Imishini yokushisa i-HLQ Induction
induction lokushisa ikhathalogu
ukukhipha izinsimbi zokushisa izinsimbi
Ukwakhiwa kwe-Coil Designing Coil Design ne-Basic Design